नबिलले नेपालमै पहिलो पटक सुरु गर्यो ‘फोन लोन’ सुविधा, यसरी पाइन्छ ऋण :: Setopati
नबिलले नेपालमै पहिलो पटक सुरु गर्यो ‘फोन लोन’ सुविधा, यसरी पाइन्छ ऋण
सेतोपाटी संवाददाता काठमाडौं,असोज ५
नबिल बैंकले नेपालमै पहिलो पटक फोनबाट ऋण लिने सुविधा सुरू गरेको छ। बैंकमा खाता भएकाहरूले आवश्यकताअनुसार एक लाख रूपैयाँसम्म ऋण मोबाइलबाट लिन सक्नेछन्।
कसरी पाइन्छ ऋण?
एफ वन सफ्ट इन्टरनेसनलसँगको सहकार्यमा बैंकले यो सुविधा ल्याएको हो। नबिल स्मार्ट बैंकिङ अन्तर्गत निवेदन दिएको केही मिनेटमै ग्राहकको ‘भर्चुअल क्रेडिट कार्ड’ मार्फत् खातामा ऋण उपलब्ध गराइन्छ। यो सुविधा लिन नबिलको स्मार्ट बैंक प्रयोगकर्ता हुनुपर्ने र यस प्रकारको ऋण छोटो अवधिका लागि उपलब्ध हुनेछ।
यसका विशेषताहरू यस्ता छन्:
ऋण लिन इच्छुक ग्राहकले बैंकको शाखा भ्रमण गर्नुका साथै कुनै कागजी प्रक्रिया बिना नै नबिल बैंकले आफ्नो स्मार्ट बैंक एपको प्रयोग गरी ऋणका लागि निवेदन दिन सक्छन्। बैंकले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी तुरुन्त ऋण प्रवाह गर्ने जनाएको छ।
बैंका अनुसार ग्राहकको बैंकिङ कारोबारसँग निहीत भएकाले कुनै अतिरिक्त धितो आवश्यक पर्दैन।
बिना धितो, बिना कागजी प्रक्रिया, बिना बैंक शाखा भ्रमण तथा तुरुन्त ऋण प्राप्त गर्न सकिने जस्ता विशेषताले गर्दा यो अत्यन्तै लोकप्रिय हुनुका साथै ग्राहकको केन्द्र बन्ने विश्वास रहेको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले बताएका छन्।
‘नेपालमा पहिलो पटक स्मार्ट बैंक एपमार्फत यति सहज र सरल सुविधा प्रस्तुत गर्न सक्नु गौरवको विषय हो,’ शाहले भने।
हाल बैंकले १ सय १९ शाखा तथा १ सय ८४ वटा एटिएम सञ्जालमार्फत् सेवा दिँदै आएको छ।
कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले फूलपातीमा गरे बाढीपीडितको घर निर्माणमा श्रमदान
आइसोलेसनमा हाँस्न सिकाउँदै कोरोना बिरामी!
बुवाको बिँडो थाम्दै काँक्रा, करेला, टमाटर फलाइरहेका शिशिर
कहाँ हरायो बौद्धिकता? सोमनाथ खनाल
भाग्यले मान्छे बनाउँछ कि मान्छेले भाग्य? सुस्मिता भट्टराई
नबुझी गुर्जो खाँदाको पीडा सिन्धु गौतम पोखरेल
दशैँको जामा राम विके 'म नेपाली'
गोत्र परिवर्तन राजु अधिकारी
आमा दशैँको सुर्ता नगर्नुस् राजन पाण्डे